Laga soo bilaabo Kml ilaa Geodatabase - Geofumadas
Laga soo bilaabo Kml ilaa Geodatabase
Ka hor inta aan ka hadlin sida Arc2Earth wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku biirto ArcGIS leh Google Earth, soo rar oo soo dejiso xogta labada jiho. Hada mahadsanid Geochalkboard waxaan ognahay sida loo soo gudbiyo xogta kml / kmz si toos ah loogu soo galo ArcCatalog Geodatabase.
Laga soo bilaabo menu-ka Arc2Earth, soo dejinta / soo dejinta kml-kmz waa la doortaa, ka dibna guddi ayaa u muuqda halka aan ku habeyneyno foomka macluumaadka soo dejinta:
Kadibna guddi ayaa muujinaya qoraalka "guud" ikhtiyaarrada lagu qeexayo haddii feylku uu taageerayo heerarka GeoRSS.
Haddii la galo Shakhsi ahaan Shirkad Shakhsiyadeed, waa lagusoo dooranayaa saldhigga mdb.
Haddii aad haysato keydka macluumaadka ee 'Enterprise database' oo laga hirgeliyey ArcSDE, waa inaad qortaa xarigga qeexaya magaca keydka, adeegsadaha, lambarka sirta iyo dariiqa adeegga. Waxa kale oo aad habeyn kartaa astaamaha fasalka Muuqaalka tagaya, haddii ay jiraan sharciyo loo qaabeeyey in lagu turjumo qaabka loo qaabeeyey kml.
In tab "xogta schema", Waad caddayn kartaa haddii faylka kml uu leeyahay astaamo luuqadeed kml 2.2, halkaasoo qaabdhismeedka xml uu kuu oggolaanayo inaad qeexdo astaamo gaar ah oo gaar ah oo loogu talagalay calaamadaha qotomiska, qaababka xariiqa iyo qaababka adag. Kuwani xitaa waxaa lagu qeexi karaa inay yihiin sheybaarro waxayna soo dejin karaan oo keliya walxaha ku jira feylka ee u dhigma shaxda ... habkaas ayaan ugu qeexi karnaa miirayaasha waxa aynaan rabin soo dejinta.
In tab «ikhtiyaar», waxaad sheegi kartaa haddii aan rabno xogta dibadda laga keeno inay bedesho waxyaabaha hadda jira ee dabeecaddiisa ay isku dheelitiran yihiin (bedelaan), haddii aan rabno inaan bedelno dhammaan wixii jira ama haddii aan doonayno in lagu daro (ku darso).
Halkaan sidoo kale, meesha ay ku yaalaan meelaha lagu daboolo dhulka.
Xidhiidhada qaar ee xiisaha leh:
Video muujinaya sida ay u shaqeynayaan Arc2Earth
Koorsooyinka laga heli karo isticmaalka Arc2Earth
Post Previous" Hore Waa maxay ESRI oo raadineysa ruqsadaha cusub?
Post Next Qiimaha gaarka ah ee ESRI ee degmooyinkaNext »